United Souls, ihe eji eme ngwa agha nke Ndi Ivorian agbajiri aka mebere - Afrikhepri Fondation
Satọde, November 28, 2020
United Souls bụ ụdị nke t-Chiefs "Casual & Street wear" na-achọ ibuga ozi na-eme ka ha dị n'otu maka ncheta maka ndị ọgụgụ isi bụ ndị na-agbachitere ikike obodo na Africa na n'akụkụ ndị ọzọ nke ụwa. United Souls bụkwa ụtụ maka egwu na ọrụ bụ isi ọ rụrụ na mgba maka ịtọhapụ ndị mmadụ a na-emegbu emegbu. Bad, jazz, mkpụrụ obi, Afrobeat, cumbia, hip-hop na ihe a na-akpọ "grooo ụwa" abanyela n'ọdịbendị nke oge a, na-enye onyinye ha n'ihe nketa ụwa.
N'akụkụ ka mma, ụdị ọhụụ na-ezigara ndị hụrụ egwu na ndị na-eso ụzọ egwu egwu ozi siri ike: isonyere United Souls pụtara itinye aka ma ọ bụ itinye ego na atụmatụ ọdịbendị na nka nke metụtara eluigwe na ala a mgbọrọgwụ ndị a. United Mkpụrụ obi na-eburu ihe ịma aka nke igosipụta nka ndọrọ ndọrọ ọchịchị, n'ụdị ya dị iche iche na ọgaranya, site na ịmekọrịta ndị nka nwere ọgụgụ isi na-ezipụ ozi. Nchịkwa ndọrọ ndọrọ ọchịchị dị ka anyị si akọwa ya apụtaghị na ọ nọ n'òtù ndọrọ ndọrọ ọchịchị. Ọ bụ ngosipụta nke nchegbu na elere anya nke ọha mmadụ na ndị na-eme ya, yana nke ha pụtara n'eziokwu ndọrọ ndọrọ ọchịchị..
Taa, ihu, dịka ahịrịokwu, gosipụtara mgba, ọgụ ma ọ bụ ezigbo. Mkpụrụ obi nke ụwa bụ ọrụ ndọrọ ndọrọ ọchịchị nke na-abịa, n'oge anyị nwere nsogbu, na mmalite nke mmadụ ịdị n'otu na mmekọrịta mmadụ na ibe ya. site n'akwụkwọ Thomas Salkara. Revolutinary Burkinabé. Ọ na-eme mgbanwe dị ukwuu iji lụsoo nrụrụ aka, melite mmụta, ọrụ ugbo na ọnọdụ ụmụ nwanyị.
Massoud Commander, onye ndú nke nnupụisi nke Afghanistan, ọ lụrụ ọgụ ruo mgbe ọ nwụrụ iji tọhapụ mba ya n'aka ndị Russia na ndị Taliban, si otú ahụ nweta aha ahụ bụ "ọdụm nke Pandjchir". Ọ bụ otu n'ime ndị mbụ na-eme ka mba ụwa mara ihe ize ndụ nke Al-Qaeda.
N'ịbụ ndị na-erubere ido isi na ngalaba White America, Rosa Parks jụrụ, 1er Disemba 1955, iji nweta ụgbọ ala. Omume a na-echefu echefu na mgba ya na esemokwu agbụrụ ga-enweta aha ya nke nne nke ndị na-ahụ maka ikike obodo.
Amilcar Cabral. Onye ndu nke otu onye nweere onwe ya nke Guinea Bissau na Cape Verde, onye ndu a na-apụghị ire ure na onye na-emegide onwe ya. Ọhụụ nke socialism na ọzụzụ agronomist ọ na-akwado nri afọ ojuju.
Minista Minista nke Democratic Republic of Congo, 1er, Patrice Emery Lumumba ka a na-akpọ "dike mba" nke nnwere onwe.
Cheikh Anta Diop, onye na-akọ akụkọ ihe mere eme, onye ọkà mmụta banyere ọdịnala, onye ọkà mmụta sayensị Senegale maara banyere mkpa na oge ochie nke ọdịbendị Africa na akụkọ ihe mere eme, nke ọ ga-egosi onyinye nye ụwa. n'azụ akara, nwoke
Jacques Goba kwagara Caen mgbe ọ dị afọ 9. O biri oge niile ọ bụ nwata na ntorobịa n'obodo Norman a dị na mgbago ugwu ọdịda anyanwụ France. mgbe ọ dị afọ 20 ọ laghachiri na mgbọrọgwụ Africa ya site na itinye afọ 5 na Ivory Coast, obodo ya. Ọ bụ ebe ahụ ka ọ chọpụtara na Africa na-asụ French na France nwere otu nketa. Ojiji nke otu asụsụ iji gbanwere, mmetụta na iche echiche, n'agbanyeghị akụkọ ihe mere eme, na-emepụta njikọ siri ike n'etiti ndị bi na South na North. Ọ bụ ọdịbendị ọdịnala nke kwesiri ka a pụta ìhè. site na United Souls, Jacques Goba chọrọ ka uche dịrị n'otu gbasara ozi siri ike na nke ụwa niile. Họrọ T-Shirt dị ka onye na-ajụ, ekele maka usoro okike ya, nke ahaziri ahazi ya ma mee ya, na-enye ohere iji ika ahụ mee ihe dị ka vector dị ike, nwee ike ime ka ụmụ amaala ụwa kwenye ma rịọ maka mmata n'Africa nke mechara bụrụ eziokwu. N'ịbụ nke etolitere na ndabere nke oru ngo, United Souls chọrọ ịbụ akara nke, site n'echiche Africa, na-enye ohere ka mmadụ nwekwuo ọhụụ nke ụwa. Nke a bụ otú Jacques Goba si chọọ igosipụta ihe ọ kpọrọ "Africa" ​​ya: ilekwasị anya na mgbanwe mmadụ, na -achọ otu ezigbo mma.
Zụrụ uwe T-shirt ebe a: http://unitedsouls.fr/fr/
Dee na ogwe ọchụchọ